China Kujekesa Mumiriri BT-9803 Mugadziri uye Mutengesi | BGT
Kujekesa Mumiriri BT-9803
BT-9803 ndiyo mhando yekutengesa yakawanda yeChloro DBS. Iyo haina makemikari eiyo viscosity, saka zviri nyore kuti igadziriswe uye hainamatire kune roller.
Inogona kushandiswa muPP uye LLDPE.
BT-9803 ihunhu hwakagadziridzwa hweChloro-DBS Kujekesa Mumiriri nekuita kwakanyanya uye pasina viscosity panguva yekugadzirisa.
Inogona kudzikisira hutsi uye inowedzera kujekesa kwepolypropylene.
Inogona kuwedzera kupisa kuramba, kuitira kuti zvigadzirwa zvePP zvigone kushandiswa muovheni yewa microwave.
Inogona kugadzirisa kumeso kutsetseka kwezvakapedzwa zvigadzirwa.
Inogona kuwedzerwa kuomarara kwechikamu chakaumbwa uye ipfupi kutenderera nguva panguva yekuumba maitiro.
Izvo zvakanaka pakubata kwekudya uye zvekurapa kunyorera.
BT-9803iri yepamusoro inoshanda Kujekesa Mumiriri wepolypropylene homopolymer, zvisina kujairika copolymer. Inogona kusanganiswa zvakananga nePP zvinhu mukushandisa kana kuita yakajeka masterbatch usati washandisa. Inogona kupa kujekesa kwakakwirira, kuwedzera kupisa kupisa uye kugadzirisa michina zvivakwa,. Iyo inoziviswa kemikari ichaiswa mune yakatetepa rusvingo jekiseni kuumbwa, firimu jira extrusion, furidza kuumba uye kutenderera kuumba.
Inotungamira misika yekuumba jekiseni, kune zvakawanda zvigadzirwa zvinogona kugadzirwa, zvinosanganisira dzimba, dzimba dzekuchengetera, makesi ehupenyu, matete-emadziro emidziyo uye majekiseni anoraswa uye akajekesa polypropylene yekuvhuvhuta mabhodhoro akaumbwa emishonga, zvinonhuwira, majusi, masosi, mavhitamini, uye mabhodhoro evana. .
Inogona kushandiswa muPP uye LLDPE
Nyukireya mumiririri imhando yemumiririri iyo yakakodzera kune asina kukwana makristasi epurasitiki akadai se polypropylene uye polyethylene. Nekuchinja iko crystallization maitiro e resin uye nekumhanyisa iyo crystallization chiyero, inogona kuzadzisa chinangwa chekupfupisa iyo yekuumba kutenderera, kuwedzera yakajeka penya gloss, kuomarara, kupisa kwemafuta deformation, tensile simba uye kukanganisa kuramba kwezvakapedzwa zvigadzirwa.
Polymer yakagadziridzwa na Nyukireya Mumiriri, Haingochengetedze chete maitiro epakutanga epolymer, asi zvakare ine nani kuita mutengo chiyero pane zvakawanda zvinhu zvine yakanaka yekugadzirisa mashandiro uye yakawanda yekushandisa. Uchishandisa Nyukireya Mumiriri mu polypropylene kwete chete kutsiva girazi, asi zvakare kutsiva mamwe ma polymers senge PET, HD, PS, PVC, PC, nezvimwewo pakugadzira chikafu kurongedza, zvekurapa zvekushandisa, yetsika chinyorwa chekushandisa kwezuva nezuva, kujekesa kuputira bepa uye imwe yepamusoro grade tafura.
Pashure: Kujekesa Mumiriri BT-9805
Zvadaro: Kunhuwa Remover
Kujekesa Mumiriri Kubva kuChina
Kujekesa Agent Mugadziri
PP Kujekesa Mumiriri
Sorbitol Yakavakirwa Kujekesa Mumiriri